Hlola iBrasov, Romania - World Tourism Portal
Hlola iBrasov, eRomania
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eBrasov, eRomania.
Yini okufanele uyenze eBrasov, eRomania
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeBrasov
Bukela ividiyo emayelana neBrasov
Hlola iBrașov idolobha lokuphumula izintaba eTransylvania, IRomania. IBrașov inabantu be-283,901 futhi iyidolobha elikhulu le-7th Romania. Itholakala cishe maphakathi nezwe futhi izungezwe Izintaba ZaseCarpathian. Idolobha linikezela ngokuxutshwa kwezindawo ezinhle zezintaba endaweni eseduze yasePuiana Braşov nomlando wangenkathi yamathonya aseJalimane edolobheni elidala. Idolobha liyi-176 km ukusuka IBucharest.
IBraşov isiphezulu lapho neSinaia nezindawo ezisezintabeni ezizungezile njengedolobha elivakashelwa kakhulu eTransylvania, eRomania, futhi lokhu akuyona into engelutho. IBraşov igcoba yonke into kusuka ekushisekeni kwempilo yamanje yedolobha kuya kweleveli yakudala yomhlaba nokubukeka okuhle. Futhi, kumnandi ukuba nezinye izinto ezingeziwe futhi, kufaka phakathi amanye amarekhodi amahle kakhulu wokuhlanzeka ezweni, ukuthutha okuhle nokudla okukhulu. Noma kuncishiswa kancane ezindinganisweni zaseRomania, ikakhulukazi ngesizini ephezulu, iBraşov nakanjani iyakufanele. Njengoba abanye abantu besho, “Kungani ukhathazeke ukuza eRomania uma ungeke ubone iBraşov? ”
Isifunda iBraşov singesinye sezivakashi ezivakashelwa kakhulu. Ngaphandle kwedolobha iBraşov nokuhehayo kwalo, Resorts of Poiana I-Braşov (12 km entshonalanga) ne I-Predeal (27 km eningizimu), kufanele futhi ukuvakashelwa. Ezinye izindawo futhi ezokuvakasha weprovince: Bran, Moeciu, Râşnov, Făgăraş, Prejmer, Zărneşti, Sâmbăta (ezansi kwezintaba ze-Făgăraş).
IBraşov inesimo sezulu esibandayo nesimanzi, ikakhulukazi ebusuku. Lesi sifunda seRomania sithokozela izinkathi ezine zonyaka (okungukuthi entwasahlobo nasekwindla kanye nobusika nehlobo). Amazinga okushisa ajwayelekile angama-7.6 ° C kuphela, noma ngabe emazingeni okushisa ehlobo angafinyelela ku-35 ° C.
Ngenxa yenani elikhulu labantu abambalwa, amaHungary namaJalimane ayakhulunywa nangaphandle kwesiRomania. Abantu bendawo abaningi bakhuluma nesiNgisi.
Ukuya eBraşov kulula kakhulu, ngoba kuyisitimela esikhulu sesitimela saseRomania. Kusuka enhlokodolobha iBucharest kunezitimela eziyi-18 nsuku zonke futhi kukhona nezitimela ezivama kwamanye amadolobha, nokuxhunyaniswa nsuku zonke I-Budapest, Hungary (nge-Oradea) kanye nokuxhumana kwe-EuroNight (okusheshayo kwesitimela) eBudapest nge-Arad.
Ngaphandle kwesitimela, imoto kungenye yezindlela ezaziwa kakhulu zokufinyelela eBraşov, ngenxa yokuxhuma kwayo umgwaqo.
Ukupaka kungaba nzima enkabeni yedolobha leBraşov ngenxa yenani elilinganiselwe lezindawo ezitholakalayo. Ukukhokha kungenziwa ngemishini yamathikithi ongayithola eduze kwezindawo zokupaka (kuphela izinhlamvu zemali ezamukelwe) futhi nange-SMS. Gwema ukuvumela imoto yakho endaweni yokupaka ngaphandle kwelithi ithikithi lokupaka kudeshibhodi, ngoba kukhona abaphathi bokupaka abangakubeka inhlawulo.
Amathayi asebusika manje ayimpoqo eRomania lapho eshayela emigwaqweni embozwe yiqhwa noma iqhwa. Uma uza ngesikhathi sasebusika qiniseka ukuthi imoto yakho ifakwe ngokuphelele ngamathayi aphethe ukubizwa kwe-M + S. Izinhlawulo zokungathobeli imithetho zingasuka ku- € 570 ziye ku- € 920.
Amatekisi ayindlela esheshayo futhi enethezekile yokuhambahamba edolobhaneni kunokuhamba komphakathi. Amatekisi nawo ashibhile. Amatekisi amaningi anamamitha kanti abashayeli bavame ukuba nobungane. Akukaze kusweleke ama-cabs ngaphakathi kwemikhawulo yedolobha nganoma isiphi isikhathi esinqunyelwe, kodwa kuwumqondo omuhle ukuthi ube nalowo obizwa, kunokufuna owodwa. Ngokomthetho, wonke amatekisi kufanele ukuthi intengo / km ibekwe endaweni ebonakalayo (imvamisa ngaphandle, eminyango yangaphambili) kanye namaphethelo welayisense eluhlaza eminyango engemuva. (Ungalokothi ungene etekisini elingenakho lokhu kukhonjisiwe. Noma la matekisi enqabile kakhulu, engenawo amamitha (asekhaya) futhi ngokuqinisekile uzongena enkingeni noma aqhutshwe umshayeli wetekisi onjalo, njengabavakashi noma izilinganiso zesikhathi sokuqala ziyimigomo yazo.) Noma kunjalo, ungabuza imali elinganiselwe kusengaphambili futhi uqiniseke njalo ukuthi umshayeli usebenzisa imitha kusukela ekuqaleni, noma uvumelana ngenani elinqunyelwe ukuhamba.
Ukuhamba ngebhayisikile kudume kakhulu kubantu bendawo nabavakashi, abeza bezothatha uhambo lwamabhayisekili emaphandleni azungeze iBrasov ukuvakashela ama-UNESCO World Heritage Sites aseduze, isibonelo uHarman, Prejmer noChristian. Uhambo oluningi olwenziwa yizinkampani luzonakekela ezokuhamba nezindawo zokuhlala. Akukho ndlela ebhalwe phansi yokulandela uma ufuna ukuhamba wedwa, ngakho-ke Thatha imephu enhle. Ukuqashwa kwamabhayisekili eBrasov kubiza kakhulu kunakwenye indawo ngaphakathi Romania nezitolo eziningi zivala ngempelasonto, okunciphisa usizo kubavakashi.
Ukuvakasha uhambo ngaso sonke isikhathi kuyikhambi elihle kakhulu lokujabulela futhi uzizwe idolobha elisha.
Ukuze uthole uhambo lokuzimela oluzimele lwesikhungo seBraşov bheka uhambo lwamasiko lwaseBrasov.
Ungathola futhi izinkambo zokuhambahamba eziqondiswa mahhala zesikhungo sedolobha, lokhu kungaba yindlela yabahamba ngezimali, abaholi nentsha, kodwa hhayi kuphela. Imvamisa, kufanele ubhukhe izinkambo, kepha ngesizini ephezulu kukhona izinkambo ezihlelelwe nsuku zonke, imvula noma ilanga.
Kukhona nokuvakasha okukhokhelwayo okufanele kutholakale, ukubhuka kuyadingeka ngaso sonke isikhathi.
Vakashela iRepublicii Street kanye ne Pia Republica Sfatului (UMkhandlu Wekhansela). Njengabavakashi eBraşov akufanele uphuthe ukuvakashela lezi zindawo eziheha isikhungo sedolobha. Futhi, ungahamba ngeTiberiu Brediceanu Promenade edumile, ngakwesokudla kwentaba iTâmpa enkabeni. Uma ungagibela izintaba ungakhuphuka intaba iTâmpa usuka e-Promenade, emizileni emithathu ehlukene, noma usuka endaweni yaseValea Cetăţii, noma uma nje ufuna ukubona idolobha kusuka phezulu ungathatha ikhebula imoto. Enye indlela edumile yokuhamba ngezinyawo i-Drumul Vechi (i-Old Route), ukusuka endaweni yasePietrele lui Solomon ukuya endaweni yasebusika yasePuiana Braşov (hlola i-OpenStreetMap ukuthola imephu enhle yomzila). Akufanele futhi uphuthelwe i-Turnul Alb (i-White tower) ne-Turnul Negru (iBlack tower), etholakala kalula ukusuka ku-După Ziduri (Behind Walls) Street futhi unikeze umbono omuhle wePiaţa Sfatului (Council Square). (Ukusuka eTurnul Negru (iBlack tower) kufanele uqhubeke nokuhamba kancane ukuze ufike endaweni yokubuka indawo eseCalea Poienii.)
Belvedere - E-Calea Poienii (Poiana Braşov Way), indawo enhle yomunye umbono onamandla wesikhungo sedolobha nokuqhubeka. Indlela engcono yokufika lapho uhamba ngemoto futhi uzothola izindawo ezimbalwa ezincane zokupaka. Ulayini webhasi i-20 uzokusa eduze kwale ndawo, kepha kuzofanela uhambe kancane. Indlela engathandwa kakhulu (futhi inzima kancane ngenxa yesimo sendawo) yokufika lapho ngezinyawo isitaladi iColţul Putinarilor Street: eSchei Neighborhood, suka eConstantin Brâncoveanu Street phezulu kuDupă Inişte Street lapho wenza khona kwesokunxele ku umgwaqo wokuqala bese uya yonke indlela uze ufike endaweni.
Dlala umdlalo wokuphunyuka e-OBSCURIA. Thatha indima yeenhloli bese ufaka igumbi lengqikimba neqembu lakho le-2 ku-6. Lapho, unemizuzu engu-60 yokuthola imikhondo, amakhodi wemfihlo wokuqonda, ukwenza kusebenze izindlela ezipholile, ukuze uqedele inhloso ye-mission. Imali yokungena yi-40 lei / umuntu, ku-avg. Imizuzu engu-10 yokuhamba ibanga ukusuka edolobheni elidala. Bona ikhasi lokuxhumana lewebhusayithi ukuthola imephu nezikhombisi-ndlela.
UZilele Braşovului (Izinsuku Zokudla ZeBraşov) - zivame ukwenzeka phakathi nesonto ngemuva kwamaholide e-Orthodox. Inemikhuba eminingana yobungcweti, yewaini, yokudla, njll. Ungumkhosi wenjabulo futhi omnandi. Le migubho iphetha kanye neMikhakha YeJuni (Intsha), isiko elidala kakhulu eligcinwe lapho, izinsizwa zigibela amahhashi enkabeni endala yedolobha ziye endaweni yasePietrele lui Solomon (Solomon Rocks), lapho ungakhonza khona ngokwesiko mici futhi ukhonze okusalungiswa ubhiya. Umcimbi ububizwa ngeDrumica Tomii (ngeSonto lokuqala ngemuva kwePhasika).
Umkhosi waminyaka yonke womculo weCerbul de Aur, uvame ukubanjwa ngo-Agasti-Septhemba. Ngakolunye uhlangothi, kuletha amakhulu abaculi be-pop nabaculi, abagqugquzeli kanye namagama amakhulu ezinkanyezi zanamuhla nezakudala. Ngakolunye uhlangothi, kugcwala indawo enhle kunazo zonke edolobheni (isikwele esikhulu) ngamathani ezinsimbi zensimbi esindayo, engxenyeni enkulu yehlobo futhi kuwa.
I-Beer Festival (i-festivalul Berii) - incane futhi ithandwa kakhulu abantu bendawo kanye nezivakashi. Imvamisa ibanjwa ekwindla. Amakhulu amatende avela ezinkampanini eziningi zikabhiya anikela ngemikhiqizo yawo. Futhi, uzokwazi ukuthola ukunambitheka kwama-mici (ama-sausage ase-Romanian grill) nokunye ukudla kwendabuko. Amabhendi endawo nawezwe kanye nabaculi bazo zonke izinkolelo bathatha isigaba.
I-Oktoberfest - uBraşov uhlela unyaka nonyaka ikhophi lomkhosi waseJalimane i-Oktoberfest. Njengomkhosi weBeer, ngempelasonto kaSepthemba ungaphuza ubhiya, udle ukudla kwendabuko futhi ulalele umculo omnandi.
Yehla uzungeze epaki ekhuphukayo i-Aventura. Amathrekhi asukela kokulula kakhulu kuya kubunzima kakhulu futhi imali yokungena imayelana ne-30 lei yomuntu oyedwa. Ungafika lapho ngamabhasi amaningana: umugqa 17 (isikhungo sedolobha), umugqa 35 (isitimela) kanye nomugqa 21. Noma gibela i-Gym Natural High enkulu kakhulu yaseRomania. Amathrekhi asukela kokulula kakhulu kuya kunzima kakhulu. Indawo: str. I-Carpatilor, ngaphakathi kwezindawo zezimboni zeMETROM.
Ukubhukuda - Kunamapaki amanzi amaningi noma izikhungo ze-spa edolobheni: IParadisul Acvatic (indawo enkulu yokubhukuda, ngaphakathi nangaphandle, ivula unyaka wonke, futhi ifaka ichibi lokubhukuda elilingana ne-olimpic; ligcwele kakhulu izimpelasonto), e-Aqua Park ( futhi inkulu, kepha ivaliwe kusukela cishe nge-2015, etholakala endaweni yaseNoua, emigwaqweni iPrunului, ngesitolo sezitolo iPenny), iBelaqva (izindawo zokuzizwa zeprimiyamu, esinye esisesiteshini esikhulu sesitimela, esinendawo enkulu yokuzivocavoca futhi enye etholakala endaweni yezitolo i-Street Coresi, emigwaqweni iZaharia Stancu, lena enechibi elikhudlwana le-olympic-sized), i-Olimpiki Swimming Pool (etholakala eBulevardul Garii, Nr 21, eduze kwesiteshi sesitimela kanye nesitimela I-Sports Hall), i-Alo Palace Wellness & SPA (indawo yokubhukuda eyengeziwe yehhotela lezinkanyezi ezinhlanu, futhi enikeza i-hydrotherapy, i-electrotherapy, isihlunu, ukuqina komzimba, ukomelela, ukuspota, i-aerobic, i-solar sunning, i-sauna kanye ne-bar), I-Spa d'Or, 18, Baritiu st, ap X I-NUMX (phakathi enkabeni yedolobha, ngqo neBlack Church, indawo ebaluleke kakhulu yedolobha). I-1: 10-00: 22. Kuphinde kuhlanganiswe nabantu abadala be-bohemian, abavamile nabanogazi abalangazelela okuhlangenwe nakho okuhlukile kwe-spa, ngaphansi kophawu lokunemba, ukuphelela kanye nokwenza komuntu uqobo. Izinhlobo abaziphethe yilezi: iSundari, uVitaman (futhi okhethwe abakwaHilton spas) kanye ne-B / sengqondo, umugqa we-spa odumile we-Buddha Bar. Futhi, izikhungo zokubhukuda ezimbili zitholakala ngaphandle kwedolobha, bheka isigatshana esingezansi. ukuqala nge-00 €.
Iya emihlanganweni yezemidlalo ephethwe yiqembu laseCorona Braşov ice hockey (e-Olimpiki Ice Rink, eTransorul Park, ngesiteshi esikhulu sesitimela) nethimba labadlali besandla sabesifazane (e-Sports Hall, eliseduzane nesiteshi sesitimela), amaBraşov marathons ( ebanjwa ngo-Ephreli), noma iTess Rally (ebanjelwe ngoMashi noma ngo-Ephreli) noma umbuthano osendaweni yangasese (njengamanje obanjwa ngo-Okthoba).
Ukuqashwa kwamabhayisekili - uBraşov akanaso isitolo esihle edolobheni, lapho ungaqasha khona ibhayisekili. EPiata Sfatului abanye abafana baqasha amabhayisekili edolobha, kodwa ngaphandle kwamagiya, izingidi noma amalambu lokhu akusizi ngalutho, ikakhulukazi ngoba isikhungo siyindawo yabahamba ngezinyawo futhi ngaphandle kwalesi sikhungo akukho mizila yebhayisekili ekhona. EBraşov nasePuiana Braşov kunesitolo, esiqashisa ngamabhayisekili asentabeni e-12-15 Euro ngosuku + Idiphozi ye-100 Euro, ebiza kakhulu ngamazinga waseRomania. Ukuhamba ngezinyawo endaweni kuyindlela engcono.
Ukuhamba ngezinyawo nokuhamba ngezinyawo - iBraşov indawo okufanele iqale kubantu abaningi abavakashela iRomania ngenqondo yokuthola izintaba. Ungaqala ukukhuphuka intaba yeTampa (1h) bese uqhubeka eP Poanaana Braşov (2h) kulandela izibonakaliso. Kunamabhasi amaningi abuyela eBraşov avela kule ndawo yezintaba. Enye indawo edumile yokuhamba izintaba yiCanionul 7 Scări (7 Ladders Canyon). Amakhulu izivakashi ahamba kule ndlela njalo ngempelasonto. Izokuthatha imizuzu eyi-50 isuka kumgwaqo iDâmbul Morii Chalet emgaqweni kazwelonke we-DN1 wokungena ekungeneni komgodi omncane, bese kuthi imizuzu engu-30 uyiwele futhi wehle kuwo uwela indlela. Qiniseka ukuthi awuphuthelwa umzila ovela kuphawu olunechashaza elibomvu nelimhlophe, ngemuva nje kokufika phezulu ngakwesokudla. Umzila unobunzima obuphakathi nendawo futhi izindleko zingena nge-10 lei yabantu abadala kanye ne-5 lei yezingane.
ISki - Ngokusho kwe-Eastern Euro Tours oGwini Coast, iRomania yindawo yokushayela e-Eastern Europe. Futhi ubucwebe bomqhele bezindawo zokuphumula ski zaseRomania nguPuiana Braşov, 12 km (8 mi) kude nesikhungo sedolobha iBraşov. Setha emahlathini aphayini we-Carpathian arch, endaweni ephakeme ye-1700 m (5000 ft), ne-19 emakiwe ama-run kanye ne-35 km yama-run angenamaki, i-Poiana Braşov inemithambeka yayo ebekwe ngamazinga ahlukene obunzima, okwenza kube lula kwabaqalayo nabasubathi abaphambili. Ukukhetha. Ingxenye ye eTransylvania, iyi-18 km (11 mi) kude ne-Branch Castle, eyaziwa nangokuthi yi-Dracula Castle. Ukudlula nge-ski kwezinsuku eziyisithupha kubiza okungaphansi kwe- $ 200. I-Ski Jumping Hill eRâşnov ibamba iNdebe Yomhlaba ye-Skiing Jumping yabesifazane njalo ekuqaleni konyaka.
Ama-Orchid. Indawo yeBraşov cishe inezinhlobo zama-40 zama-endchid Orchids ezingabonakala. Uma ufisa ukuzibona zixhumana neRomania Orchid Lovers Club, e-Râşnov 20 km ukusuka eBraşov.
Swim - Ngaphandle kwedolobha ongaya kulo ukubhukuda eLaguna Albastră (Blue Lagoon), indawo yokubhukuda engaphandle, ebekwe 65 km ukusuka enkabeni yedolobha, ikhilomitha elilodwa ngaphambi kokungena edolobheni laseF towngăraş. Kubandakanya indawo yokuhlala, indawo yokudlela kanye nezichibi ezimbalwa zokubhukuda, kepha kugcwele kakhulu phakathi nezimpelasonto. Enye indawo ethandwa lapho ungalala khona ilanga futhi ubhukude yiNatura Parc eChichiş, 22 km ibheke eSfântu Gheorghe. Lokhu kungaphandle futhi kuvulekile ngesikhathi esishisayo.
ILiberals Bear Sangment - Idalwe kwinkumbulo kaMaya (ungayifunda ngendaba yakhe ngezansi), namuhla iSanal “Libearty” iyikhaya lama-71 amabhere ansundu ase-Europe nebhere eyodwa emnyama yase-Asiya, bonke basindiswe empilweni enonya yokuhlukumezeka ekudingisweni. Ibonwa ngochwepheshe abaningi abathunjiwe njengezindawo ezinhle kakhulu zebhere emhlabeni, iqukethe amahektha angama-69 amahlathi aluhlaza, imifudlana kanye namachibi, onikezwe ngomusa yiDolobha laseZărnești, elisezansi kwezintaba zaseCarpathian eduze kweBrașov, Romania, edolobheni laseZarnesti. http://ampbears.ro/en/bear-sancwele
Ekuthengeni okungathandekiyo kunamathuba amaningi, amanye awo akhiwe ngaphakathi kweSikhungo (ngokunembile engxenyeni yeCitadel, efana neRepublicii Street) nabanye ezitolo ezinkulu eziningana, isib. Unirea Shopping Center, Eliana Mall. Kwavulwa indawo enkulukazi yezitolo ebizwa ngeCoresi Shopping Resort endaweni yaseTrafforul, kuZaharia Stancu Street. Kubandakanya i-cinema eningi, inkantolo yokudla, indawo yokubhukuda, isitolo nendawo enkulu yokupaka.
Ngokudla nokuthenga njalo ama-hypermarkets (Carrefour, Kaufland, Metro, Selgros - laba bobabili badinga ukuba nekhadi lamakhasimende -, kepha nePenny Market, iXXL Discount neLidl) kuyisixazululo esihle. Iningi lazo ligxile ekungeneni / ekuphumeni ukusuka / kuye IBucharest.
Ngokudla kwemvelo, okujwayelekile futhi okunempilo (kwemvelo) kwaseRomania, izimakethe ziyindlela enhle. Indawo enconywe kakhulu yi-Astra Market (Piaţa Astra). Kunezinhlobo ezimbili zokudla ezithengiswa lapha: ezingeniswa futhi zakhiqizwa ngabalimi abavela emaphandleni. Lesi sakamuva sibiza kakhulu kunangaphambili, kodwa sisezingeni eliphezulu. Ukufika lapho sebenzisa umugqa webhasi i-6 kusuka esikhungweni (i-Livada Poştei). Kungukuhamba ngemizuzu eyi-13. Njengoba ulapha, ungavakashela futhi isikhungo sezentengiselwano i-Orizont 3000. Inezitolo ezincane ezinazo zonke izinhlobo zezimpahla zezidingo ezahlukahlukene nekhwalithi. Ezinye izimakethe zezithelo nemifino yiPiaţa Dacia (eduze kwesiteshi sesitimela), i-Piaţa Star (yi-Star mall enkabeni yedolobha) noma uPiaţa Bartolomeu (endaweni yakwaBartolomeu).
Uzothola nezinto zokugqoka ezishibhile esikhungweni sezentengiso eBrintex, eBartolomeu, eduze kwe-Eliana Mall. Ngaphakathi uzothola nepaki yokuzijabulisa ye-Superland, indawo enhle yezingane yokuzijabulisa.
IBraşov iphephe kakhulu kubavakashi. Ambalwa amadolobha noma kuphi emhlabeni azizwa ephephile, futhi ukuba khona kwamaphoyisa kubavakashi kuyabonakala, ikakhulukazi ezindaweni ezivame ukuvakasha izivakashi. Imvamisa ubungozi obukhulu ukupakishwa okufakwa ephaketheni (njengasesiteshini sesitimela) noma ukusatshalaliswa “ngamasu” ahlukahlukene, wonke lawo angavinjwa kalula. Ungaguquki imali ku-Change Bureaus ngokwesibonelo, sebenzisa Amabhange.
Eminyakeni embalwa edlule, amabhere abedume ukuza ezodlisa izimbotshana zezindawo ezingaphandle. Ngaphandle kokusho ukuthi amahlathi ebusuku ayizindawo ezinhle zokuhamba wedwa. Ungenzi noma yini eyisiphukuphuku njengokuzama ukubondla noma ukusondela kakhulu noma ukuphatha iPizza ephaketheni lakho. Futhi, uma uhamba ngezinyawo emahlathini, yenza umsindo. Xoxa nabangane bakho, shintsha amagatsha adlulayo, gxumela amahlumela njll. Izilwane eziningi zasendle zizama ukungabi kude nabantu futhi zibahlasele kuphela lapho zibunjiwe, ngakho-ke ukwazisa ukuthi ukhona kuzokuvikela.
Ukushintshana ngemali kungaba inqubo efunwayo. Uma kumele kwenziwe, zama ukukwenza ebhange elikhulu, njenge-BCR, BNR, BT, noma iRaiffeisen Bank. Lawa mabhange amukela imali enkulu (i-Euro, amaDollar aseMelika, amaDollars aseCanada, amaPondo waseBrithani, njll.) Futhi anomusa omkhulu. Uzodinga ukuletha ipasipoti kanye nawe lapho ushintshana ngemali emabhange ukuze kube khona umkhondo wephepha labo.
Ama-ATM atholakala cishe yonke indawo eBraşov, noma kunjalo, okunye ukuhlolwa kumele kuqedwe ngaphambi kokusebenzisa i-ATM. Okokuqala, zama ukusebenzisa i-ATM esebhange, futhi uyisebenzise ngamahora ebhizinisi ajwayelekile. Uma kukhona okungahambi kahle, njengokugwinya ikhadi lakho, noma kungakhiqizi imali, ungangena kalula ngaphakathi ulilungise. Okwesibili, ngaphambi kokufaka i-PIN, kuzokhonjiswa umyalezo, imvamisa ngesiRomania nesiNgisi. Lo mlayezo uzoba nenombolo yocingo kuwo, ohambelana nomugqa we-ATM Support / Fraud osebhange okukhulunywa ngalo. Kubalulekile ukubheka le nombolo phansi, uma kwenzeka kwenzeka okuthile.
Abahambi base-US bangafuna ukusebenzisa i-Card Card ukukhipha imali emazweni aphesheya bebonke. IVisa inethiwekhi yokuhlanganisa, kanti iMasterCard inamanethiwekhi weCirrus neMaestro, womabili asetshenziswa emhlabeni wonke. Lawa ma-network akuvumela ukuthi ukhiphe imali ngemali ekhokhwayo ($ 2). Kusetshenziswa ikhadi lesikweletu kusho ukuthi uma ikhadi lakho libiwe, ulayini wokusekelwa womhlaba wonke uyatholakala ukukusiza ekuphikiseni amacala, futhi, ngaphansi kwezimo ezithile, uthole ikhadi elisha kuwe ngeviki lebhizinisi. Ikhadi lokudonswa kwemali alinazo lezi zici, futhi izindleko zokuphikisa zingaba nzima kakhulu.
I-Râşnov, enenqaba yayo enkulu nomlando ogcwele ibanga le-16 km kuphela. Kungafinyelelwa ngebhasi ukusuka e-Autogara 2 (eyaziwa nangokuthi i-Autogara Codreanu), ngesitimela ukusuka esiteshini esikhulu, ngemoto ibheke kwa-Bran / Pitesti, noma nge-hitchhiking.
ISighișoara, idolobha eliphakathi elinamandla elihlelwe ngu-UNESCO njengeSiza Somhlaba Wonke, 117 km kude neBrașov, singafinyelelwa ngesitimela
ISibiu, Inhloko-dolobha Yamasiko YaseYurophu 2007, idolobha eliphakathi elinombono omuhle wezindawo ezungezile, isikhungo sezwe elincane laseRomania kusukela ezikhathini zangezikhathi zasendulo, ibanga le-142 km ukusuka eBrașov, singafinyelelwa ngesitimela.